Oslo oo si weyn looga xusay 1-da Luulyo +Sawiro - iftineducation.com
iftineducation.com – Xaflad weyn oo lagu xusayay maalinta 1-da Luulyo ee xoriyadda Soomaalida koonfureed iyo israacii Wuqooyiga iyo Koonfurta ay ku midooween sanadkii 1960 ayaa waxey ka dhacday fagaarahasofienbergparken magaalada Oslo ee dalka Norway.
Waxaa halkaasi ka mid ahaa dadkii ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Soomaaliya C/samad Maxamuud Xassan , taliya waaxda socdaalka C/laahi Gaafow oo ku nuux nuuxsaday in la taageero habsami usocodka nabadda Soomaaliya , waxaana sidoo kale halkaasi dhiiri galin iyo taariikhdii halganka ka iftiimiya halgamaa C/qaadir Cali Boolaay oo ah ragga fara ku tiriska ah ee ka nool dhalinyaradii ku jirtay SYL .
Munaasabadda ayaa sidoo kale waxaa heeso, suugaan , ciyaaro iyo madadaalo ay kasoo bandhigeen fanaaniin Soomaaliyeed oo uu horkacayay Xuseen Nuuriyow iyo waliba Dhalad oo loo yaqaano Iskaashato oo ah fanaan da’yar oo ku nool dalka Ingiriiska kaasoo si xiiso badan leh u madadaaliyay da’yartii kasoo qeybgashay oo xiiseynayay muusigga nooca casriga ah.
Jawiga cimilada oo ahaa mid xumaa ayaa gabagabadii xafladda waxaa dadkii kala buriyay roob xooggan kaasoo ka da’ay goobtii iyadoo ay jamaahiirtiina ay kala raadsadeen deyrar ay galaan maadaama ay meeshu aheyd barxad aan laheyn meel lagu onkorto.
In ka badan 36.000 oo Mareeykan ah ayaa aqaladoodii ama Guryahoodii iskaga cararay,waa maxay sababta ? (Daawo Muuqaal+Warbixin)